Faranjigow Anigu waxaan ahay Aji, isaguna waa Midgaan!!!
Getty Images; 1/11/2003
Aji: Waxaanu nahay dad dhalad ah oo Ayrish(Irish) ah.
Faranji: Waa yaab! Haddii aad adigu Ayrish tahay, aniguna maxaan noqonayaa?
Aji: Maya, maya waan khaldamay ee raali noqo. Ma ahi Ayrish ee waxaan ka soo jeedaa Carab!
Faranji: Haddii aad adigu Carab noqotay, Carabtuna maxay noqonaysaa.
Aji: Kaas ma arkaysaa waa Jareer adoon ah. Kaas kalena waa Midgaan uraya. Kaasina waa Yibir, Tumaal…
Faranji: Iyaga gartay ee adigu maxaad tahay?
Aji: waxba garan maysid ninyahow Mareykan dhega xiran baad tahay! Dadkii na yaqaanay adiga ma tihid! Illaahow bal muu Ingriis ahaado! Xataa isuma sheegeen!
Franji: Waa runtaa oo miyaan idin kala aqaanaa idinkaa iskala gurayee. Aniga dhamaantiin waxaad ii tihiin daanyeero madmadow oo fool xun-xun. Waxaa kuu wanaagsan in waxaad tahay aad ogtahay!
Meel walba oo aad tagto, dadku waxay ka siman yihiin in Bini Adamku isku meel ka soo jeedo. Dadku ha ku kala duwanaadeen xagga midabka iyo muuqaalkaba, laakiin waa isku abtiris iyo isku asal. Waxaa geesaha dunida maanta ka socda olole looga soo horjeedo is kala gurka iyo kala sareynta. Tusaale ahaan, waxaa meel walba oo magaaladan Minneapolis ah suran boodhadh waaweyn oo ay ku sawiran yihiin dadyow kala sinji duwan oo isweydiinaya su’aashii uu Cali Azhar weydiiyey Soomaalida shirkii lagu qabtay Jaamacada Minnisota ee ay Ardaydu soo abaabuleen. Su’aashaasi waa “Horta anigu yaan ahay”?. Jawaabta isla looxaantaas waaweyn ee ka taagan jid walba ku qorani waa “ Anigu waxaan ahay Bini Aadam”. Dadka qaar baa ku oranaya waa iska caadi ee maxaa loogu soo qorayaa, haddaba waa caadiye ma ku dhaqantaa? Ma waxaad ka timid Adam(cs) oo ciid ahaa mise kii iska sareysiiyey ee Ibleys ahaa? Waa maxay asalkaagu? Waa maxay qabiilkaagu? Maxaa qabiilkaaga laandheere ka dhigay? Ogow diintaa noo sheegtay iyo diintaanu ku dhaqanaa waa laba hal!
Looxaantaasi waxay cashar qof caqli lihi wax ku qaato ka bixinayaan in laandheere kasta ahaw, meeshaad doontid ka soo jeed, sidaad doontid u ekoow, laakiin aad aakhirka Aadam(cs) aad ku biya shubanaysid oo aadan cidna wax dheereyn. Waxaa weliba xayeysiiskani uu aad u dhibayaa dadyowga ku caanbaxay cunsuriyada iyo takoorka ee uu Neo-Nazi-ga madaxa diiran iyo Ajigu ka mid yahay. Waxaa dhibaysa Naaziga cunsuriga ah qof aan Cadayn baa kula siman oo aad wax la wadaageysaa isna dhexgaleysaan sida ay guud ahaan Ajiga u dhibto Midgaan baa kula siman oo aad wax wadaagi kartaan.
Markaanu u soo leexano Cunsuriyada iyo takoorka Ajigu ku hayo walaalahood, maxaa loo waayey aqoonyahano, culumo iyo madaxyaweyn kacda, dhiidhida oo la safata Midgaha kana hortimaada dhibaatada ay Islaweynta kale ku hayaan. Ka hadlid shir ama meel wax ku qorid wax badan tari mayso ee waxaa loo baahan yahay in laga tusaale qaato sida ay noogu arxamayaan dadyowga kale ee aan nala jinsiga ahayn marka Ajiga Cadi uu Ajiga Madow iyo Midgaankaba uusan kala garanayn ka nasabka ah ama laandheeraha ah.
EEGA QORAALKA LA BILILIQAYSTAY
Goormaynu u sheygaynaa miirkayaga sinaan, ixtiraam cadaalad iyo isxaqdhawr. Bal ila akhriya halkan..
Waxaa kale oo wanaagsan in uu Ajigu haddii uu diiday in uu walaalahood ka qaado cunaqabateynta uu ilaaliyo xaqdhowrana sharaftooda iyo maalkooda. Horaa loo boobay dhulkii ay lahaayeen Midguhu, Xoolahoodii, sharaftoodii iyo taariikhdoodii, waxa keliya ee maanta soo ifbaxaya waa baraarug iyo sidii ay qawmiyadani wax ula qaybsan lahayd kuwa ka faanaya ee cuna qabateeyey. Waxaase ka daran haddiiba aan waxba loo ogolayn xataa qoraal la qorayba allaha ka dhigee. Akhristayaal, bal ila akhriya ninkan sawirkiisii ku soo daabacay maqaal dheer oo horay ugu soo baxay somalitalk iyo Midgaan.com. Ninkani wuxuu xilligan la joogo isku dayayaa in uu raaco tubtii abkoowgii ee ahaa dhaca, boobka iyo minguurinta taariikhda iyo qoraalada ummad ka facweyn oo kaga soo horeysay ceelkan Soomaaliya. Goormaynu u sheygaynaa miirkayaga sinaan, ixtiraam cadaalad iyo isxaqdhawr. Bal ila akhriya halkan..
Waxaa lacag aan la koobi Karin uu ka faaiidey ninkii Carabka ahaa ee isagu duubay banaanbixii nacaybka iyo takoorka watay ee ka dhacay sanadkii hore magaalada Lewiston ee Gobolka Maine ee dalweynaha Mareykanka. Waxaa soo qaban qaabiyey banaanbaxaa dadka cunsuriga ah ee madaxa diiran ee loo yaqaan Naaziga Cusub(Ajiga Cad) iyo Kaniisadooda loo yaqaan World Church of the Creator. Dadkani waxay rumeysan yihiin in Qofka Cadi uu ka sareeyo dhamaan makhluuqaadka kale oo dhan, sidaa daraadeed ay mamnuuc tahay in lays dhex galo, laysla derso, laysla fariisto, wax laysla cuno amaba laysku milmo. Waxaan filayaa in uu Ajigu arrintan aad u fahansan yahay! Maxaa isku mid ka dhigay Naasiga Cusub iyo Ajiga? Jawaabtu waa sahal; Ibliis Sheekadiis lee ahaa!
Ninkaas carabka ahi wuxuu u bixiyey dukumuntaariyadii uu ka duubay banaanbaxaas “ The Letter” ama Warqadii. Waxaa mudan in la xuso in Lewiston ay tahay magaalada keliya ee dalweynaha Mareykanka ay ugu badan yihiin dadka Cadaanka Sooca ah waana 97% Cadaan aan la badhxin.
Balaayadoo dhami waxay ka kacday markii ay Soomaalidu ka soo qulquleen Gobolada Koonfureed ee Mareykanka soona aadeen Gobolka Waqooyi ee xadka la leh Kanada, gaar ahaan Lewiston oo ah magaalo bucshuro ahaan iyo shaqa ahaanba waa hore dhimatay oo ay dadkeedu inta badan shaqo la’aan yihiin. Waxaa kaloo magaaladan u dhow tuulo yar oo uu ka dhashay ninkii Mareykanka ahaa ee lagu jiidayey jidadka Muqdisho.
Haddaba waxaa ishayn kari waayey Duqii Magaalada Lewiston oo warqad u qoray Odayaasha Soomaaliyeed ee kusoo horeeyey Magaalada, una sheegay in ay dadkoodu xaalufinayaan wixii yaraa ee dhaqaala ahaa ee ay magaaladani lahayd. Wuxuu ka codsaday in ay Soomaalidu u sheegto dadkan isa soo bara kiciyey ee marba meeshii naq leh(Caydha) aadaya ay istaajiyaan oo ay u sheegaan in aanan waxba haysan, meeshoodana joogaan. Warqadaas iyo warkii ku qornaa ayaa meel kasta gaaray oo hadal haynteedu waaya dhan socotay. Dadyowga aan Cadaanka ahayn ee laga tira badan yahay iyo kuwii Cali Beysteenka ahaa oo iyagu dhulka waaya hore lahaan jirey ee loo awood sheegtay(sida Midgaha) ayaa iyagu qaylo iyo bulaan bilaabay. Waxaa loo sheegay Duqa Magaalada Raymond in uu isba awoowgii iska yimid oo aan cidna weydiin meesha uu degi lahaa iyo sida uu u noolaan lahaa. Halkan ka akhri warqadii uu Duq Raymond u diray Somalida EEG HALKAN.....
Intaa loogama harine Duqowdii iyo Jaaliyada Soomaaliyeed ee Lewiston ayaa u diray warqad cabasho ah oo ay kaga dalbanayaan in uu raali gelin ka bixiyo warkiisii takoorka iyo quudhsiga xambaarsanaa ee ay dunidu baahisay. Waxaanse isweydiiyaa goorta ay Duqowda soomaalidu raaligelin ka bixin doonaan takoorka iyo quudhsiga lagu hayo Midgaha. Halkan ka akhri warqadii ay Soomaalidu ugu jawaabtay Duqa magaalada Lewiston.. EEG HALKAN.....
Waxaa markiiba is abaabulay dadkii deganaa magaaladaas oo u soo hiiliyey Soomaalida, kadib markii laga war helay in Kaniisada World Church of the Creator loo ogolaaday in ay magaalada yimaadaan dhoola tusna ku sameeyaan si dhamaan dadka Midabka lehi khaas ahaan Soomaalida loo argagax geliyo. Waxaa meel walba buux dhaafiyey dad Cad-Cad oo u hiilinaya Soomaalida iyadoo tiradii Soomaalida ahay ee banaanbaxaa iyo kuwa la mid ahba ay mar walba ka yaryihiin 50-meeyo.
Waxay dadkaasi noqdeen kumaankun ka kala yimid gobolo fogfog si ay u difaacaan Soomaalida. Waxaana sawaxankii, Durbaankii, caydii iyo afxumadii Cunsuriyiinta ka qayla dheeraaday tii lagu taageerayey Soomaalida. Waxaa ka soo qaybgalay Gudoomiyaha Gobolka, Xeer Ilaaliyaha iyo Madax badan oo ku jirtay Golaha Odayaasha u metela Magaaladaas. Waxaa qudbado muhiim ah loo akhriyey dadkii loona sheegay sida ay Soomaalidu magaalada ugu soo kordhiyeen baayacmushtar, Shaqo jacayl iyo sida dadka Magaalada degani shaqo u heleen ilaa iyo intii ay soogelootigani yimaadeen. Waxaa la xusay in Soomaalidu shaqaysato lagana shaqaysto, in ay guryihii duuga ahaa ee banaanaa ay buuxdhaafiyeen, in magaalada ay ku soo kordhiyeen lacag, in canshuur badan laga qaato, in iskooladii dawlada iyo kuwii Seeraaleyaashu buuxdhaafeen iwm.
Inta ay ummadu bulaankaa iyo qaylada ku jirtay, ninkan Carabka ahi isagu duubasho iyo filim qaadasho ayuu ku jiray. Maantana Filimkiisan goosgooska ahi waxaa laga codsaday meel kasta oo Mareykanka ah iyo Jaamacad kasta. Gorgortan lala galay awgeed ayuu mustaqbalka dhow wuxuu soo bixi doonaa isagoo lasoo habeeyey oo uu ku heli doono malyuumaad.
AJIGII CADAA ARAGNAYE KAN MADOOBI GOORMUU WAX GARAN
Bal ila akhriya halkan:: WAA BILILIQO SAWIRA KU DHEGSATEY..